iprofayile yenkampani - GUANGDONG PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
Ifumaneka eShaoguan, isixeko esimangalisayo kumantla eGuangdong, eGuangdong Pengwei Fine Chemical. Co., Ltd (GDPW), eyayisakuba yiGuangzhou Pengwei Arts & Crafts Factory ngo-2008, lishishini lobugcisa obuphezulu elasekwa ngo-2017 elixhalabele uphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Ngo-Okthobha, ngo-2020, umzi-mveliso wethu omtsha wangena ngempumelelo kwi-Huacai New Material Industrial Zones, Wengyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province.
Sinemizila esi-7 yemveliso ezenzekelayo enokubonelela ngokufanelekileyo uluhlu olwahlukeneyo lwe-aerosols phakathi kwayo imigca emi-2 yimigca ye-aerosols yobuhle, eminye imigca yesiqhelo yemveliso. Ngaphandle koko, sikhethekileyo ekuveliseni iimveliso ze-aerosol zoshishino, umthendeleko kunye neziganeko, ukunakekelwa komntu, ukunakekelwa kwekhaya kunye nokunyamekela imoto okuthetha ukuba sinamandla okuvelisa iintlobo ezininzi ze-aerosols. Okubaluleke ngakumbi, inkampani yethu inevenkile yokusebenza engenathuli ehambelana nomgangatho wokuhlola. Okwangoku, sineempawu zokuthengisa ezi-6 ezifana ne-XETOURFUL, i-JIALE, i-PENGWEI, i-MEILIFANG, i-QIAOLVDAO njalo njalo, i-patents ezi-6 kunye ne-software ezi-6 zamalungelo okushicilela.
Ukugubungela isabelo esikhulu semakethi yamazwe ngamazwe, sahlulahlulwe kwishishini eliphambili leeerosols zefestive zaseTshayina. Iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe engaqukanga kuphela izixeko ezikhulu zaseTshayina kodwa namazwe angaphezu kwama-50 aphesheya. Injongo yethu kukuba libe lishishini elitsha elikhokelayo lecandelo leemveliso kunye nokudala iqonga lokuvelisa elinempembelelo kwindawo ye-aerosol kwiminyaka emithathu.
Namathela kwintsha yetekhnoloji
Ukubambelela kubuchwephesha obuqhutywa yintshatsheli sesona sicwangciso singundoqo sophuhliso. Siququzelele iqela eligqwesileyo kunye nebhetshi yemvelaphi yemfundo ephakamileyo abancinci abanetalente kwaye banobuchule obuqinileyo bomntu we-R&D. Ngaphandle koko, sikwanayo nentsebenziswano ebanzi kwiiprojekthi zesayensi kunye nezobuchwepheshe kunye neeyunivesithi ezininzi ezaziwayo ezifana neYunivesithi yaseSouth China yeTekhnoloji, iYunivesithi yaseGuangdong yeTekhnoloji, iYunivesithi yaseShaoguan, iYunivesithi yaseHunan yoBuntu, iSayensi kunye neTeknoloji njalo njalo.
Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo lomgangatho obalaseleyo kuzo zonke izigaba zemveliso kusenza siqinisekise ukwaneliseka okupheleleyo kwabathengi. Ngaphezu koko, sifumene iimvume zokuthambisa, ilayisenisi yokuvelisa imichiza eyingozi, ISO, EN71 kunye nemvume yokukhupha ezingcolisayo. Kunyaka ka-2008, siye sawongwa ngewonga 'lenkampani enekhontrakthi yokujonga nexabiso letyala'.
Guangdong Pengwei Fine Chemical. Co. Ltd ilindele ngolangazelelo olukhulu abantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ekhaya nakumazwe aphesheya beze kwiingxoxo ngoshishino, intsebenziswano yobugcisa nezoqoqosho kunye nokufumana izisombululo zokuphumelela.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO, UMTHENGI KUQALA